Nhungamiro Yokushanyira El Yunque National Rainforest
El Yunque inzvimbo inonaya mvura inonaya mvura iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwePuerto Rico . Imwe chete inopisa mvura inopisa pasi pemureza weU.S., El Yunque inongova 28,000 maekare (maduku nemasango emasango), asi yakanyanyisa muzvitsuwa zvitsuwa, kusiyanana kwezvisikwa, uye kunaka kwekunaka.
El Yunque zvinoreva "Chifukidzo," uye iyo inonzi yakadanirwa yepamusoro yepamusoro. Dondo iri chikamu chezvinyorwa zvePuerto Rican: Taíno Indian vaidavira kuti rainforest yaiva musha kune mwari ane tsitsi anonzi Yuquiyú.
Chii Chinoita El Yunque Special:
Kunze kwekusiyana nedzimwe US ​​Forest Service, El Yunque ane mhando dzakasiyana-siyana dzemafuta , zvinosanganisira 150 dzinowanzoberekerwa fern species uye 240 miti yemiti (23 ayo inowanika musango chete) inowedzera muEl Yunque, nekuda kwemoyo yakakwana uye yakasimba mvura. Mukuwedzera, sango rinogara kune mhuka dzakawanda dzakawanda dzisinganwani kune imwezve pasi pano. Miti yemiti inoputika, Puerto Rico Parrot, uye pygmy anole ndeyevanhu vayo vashoma uye vanogaramo.
Nzira Yokusvika Seiko:
Kana uri kutyaira kubva kuSan Juan, tora Rwendo 3 kunze kweguta uye famba neawa imwe kuenda kuRwendo 191, iyo inokutora iwe mumvura.
Imwe nzira yekuenda nayo ndeyekutora rwendo, mazhinji ayo anogona kurongwa kubva kuhotera yako. Makambani anopa mafambiro kumvura inonzi rainforest anosanganisira:
Nhoroondo dzePuerto Rico
Vazhinji vekushanyira vanoenda kumvura inonaya kunakidzwa nemigwagwa yayo, iyo inotangira kubva nyore kuenda kune unyanzvi.
Iyi mepu inobatanidza inopa mhedziso yemigwagwa mikuru yehlathi. Inonyanya kushanyirwa ndeyeLa Mina Trail nokuti inotungamirira kuLa Mina Falls. Iyi ndiyo chete mvura inonaya mumvura inonaya yakazarurirwa vanhu kuti vashambire. Pazuva rinopisa, mushure meawa yekufamba, hapana chakafanana nekubvarura kusvika kushamba yako yekushambidza uye kupota pasi pekudonha kwekudonha.
Dambudziko rega reLa Mina nderekuti rinowanzozara. Uyewo, hapana kuchinja makamuri, saka shandisa sutu yako kana kushandisa mavara kuitira kuti iwe uwane!
Nguva Yokuenda Ikoko:
Dondo racho rinosvinurwa zuva nezuva kubva pa7: 30 mangwanani kusvika 6 pm. Sezvo kutonhora kusinganzwisisiki, kune gore raunopinda.
El Yunque KuAdrenaline Junkies:
Kana iwe uchida chimwe chinhu chinotyisa kupfuura kufamba, shandisa Aventuras Tierra Adentro. Aventuras Tierra Adentro ichakutora iwe pamba yecanyoning yemvura inonaya iyo ichakuita iwe-zip-lining, kukurudzira, kubhururuka uye kugomera mumhepo.
Theaters and Performance Venues muSan Juan
Nzvimbo dzeMiddle Romantic Restaurants muSan Juan
Zvinonyanya kukosha Kutanga Kuenda Kwako kuPuerto Rico
Nzira Yokutenderera Sei muPuerto Rico
Nhema, Nhoroondo, uye Kutenda Mashura: Mhando dzevanhu vePuerto Rico
Paseka muWashington DC
15 ye Best Best Kochi Boutique Hotels and Homestays
I 9 BYOBs Yakanakisisa yeItaly muPhiladelphia
Iko @SkinnyWasHere Inofamba Nyika Mundima
Park West Shopping Mall ku Peoria, AZ
Art Galleries muAfrica
Nurseries & Garden Centers kuWashington, DC, MD uye VA
Farira Zvinhu Zvokuita muJackson WY
10 Ndege Dzakashata dziri muEurope
Pamberi uye Pakuzotevera Phoenix Pro Bowl uye Super Bowl
Great America Visitor Guide
Nyika Dzinodiwa Uchapupu hweJena Fever Kurwisa